EX - ABSDF: သူခိုးတို့၏ ဘဏ်တိုက်ကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်း အပိုင်း (၃) နိဂုံးပိုင်း
သူခိုးတို့၏ ဘဏ်တိုက်ကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်း အပိုင်း (၃) နိဂုံးပိုင်း
Khin Mgoo shared Minmaha Bagan's photo.
၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ မြန်မာ့ စီးပွါးရေးဆိုင်ရာ ရင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းစု၏ အဆိုအရ (SOE)ဟုခေါ်သော အထူးပြု နိုင်ငံရပ်ခြားစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ အဖွဲ့မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၉ ထောင်ကျော်အကျိုးမြတ်ရရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်သန်းရွှေထံသို့ သံတော်ဦးတင်ပါသည်။
မြန်မာ့ ဦပိုင်းနှင့်ပူတွဲနေသော မြန်မာစီးပွါး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းအပြင် အခြားသော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစုများ ပါဝင်ပတ်သက်လေတဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ကျော် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လာကြသော ပင်မ စီးပွါးရေး(၁၈)ခုဖြစ်သည့် ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်း၊ အထည်အလိပ် နှင့် သစ်အချောထည်လုပ်ငန်းများ အစားအစာနှင့် အရက် ယမကာ လုပ်ငန်းများ၊ ကုန်တိုက်အရောင်းဆိုင်တည်ဆောင်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ သံမာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်သွယ်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ အဝေးပြောလက်ကိုင်ဖုန်းလုပ်ငန်းများ၊အလှကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများနှင့်ကုန်စည်ဖလှယ်ရောင်းချရေးလုပ်ငန်း နောက်ဆုံး သစ်လုံးတင်ပို့မှုလုပ်ငန်း များမှ ရ၇ှိသော ၀င်ငွေအားလုံးတို့သည် ဦးပိုင် ကုမ္မဏီသို့ တိုက်ရိုက်လွဲပေးခဲ့ကြရသည်။
ထို့အမြင် အဓိက အင်းအားကြီးမားသည့် နိုင်ငံတကာမှ ငွေလုံးအငွေရင်းဖြင့် လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူးများအားလုံး ဦးပိုင်မှတဆင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြရ၏၊ ထိုသို့ ဦးပိုင်မှ ဖြတ်သန်းဆောင်ရွက်ရသော အကျိုးတူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း ၅၀ကျော်မျှမက ၁၉၉၉ မှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိ ဦးပိုင်နှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းကြီးပေါင်း ၃၈ ခုရှိပြီး ပစ္စည်းကရိယာပြုပြင်ရေးနှင့် တင်ပို့ရေး ကုမ္မဏီပေါင်း ၉ ခုရှိနေသည့်အပြင် တနိုင်ငံလုံး ဦးပိုင်မှ ဂုတ်ခွစီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားမှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၇ ဘီလီယံခန့်ရှိကြောင်း တိုင်း မဂ္ဂဇင်းက သူ၏ အွန်လိုင်းစာမျုက်နှာတွင် ရေးသားထောက်ပြဘူးသည်။
ဇန်နာဝရီလ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်း အခွန်ဦးစီးဌာနမှ ကုမ္မဏီများအား ပစ်မှတ်ထားသည့်အနေဖြင့် အခွန်ငွေ ဥပဒေအသစ် ပြဌာန်းပြန်၏။ သို့သော် ဦးပိုင်နှင့် အခြားများပြားသော အစိုးရနှင့် ပတ်သက်လုပ်ကိုင်နေကြသောကုမ္မဏီများအဖို့ကတော့ ထိုပြဌာန်းပါ ဥပဒေသည်လဲ အခွန်ငွေပေးဆောင်ရန် ကိစ္စမှ မျက်သာပေး ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိနေခဲ့ကြပြန်သည်။
ဦးပိုင်မှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ နာမည်ပျက်စားရင်းတွင်ပါဝင်သော မြောက်ကိုရီးယားမှ ခေါင်းစွန် ငွေကြေးရင်းနှီးမြုပ်နှံရေး ဘန်လုပ်ငန်းစု သို့ ငွေအမြောက်များ ပိုဆောင်ထားသည်ဟုသိရသည်။ ၄င်း မြောက်ကိုရီးယားဘန့်အား မြန်မာနှင့် အခြားသော နိုင်ငံများဆီသို့ လက်နက်တင်ပို့ရောင်းချရာတွင် ငွေ အလွဲပြောင်းလုပ်ပေးကာ သဲ့ယူနေသော ဘဏ်တခုအဖြစ် သံသယမကင်းစွာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ သတ်မှတ်ထားသည်။
၂၀၁၀ ကာလ၀န်ကျင်းက ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တင်ပို့ရောင်းချမှ ရရှိသော ငွေလုံးငွေတောင်ကြီးအား၊ မြောက်ကိုရီးယားမှ ဒုံးကျဉ် ပညာရှင်းများကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ စီးပွါးရေးသမားများ အသွင်ဆောင်စေပြီး မြန်မာပြည်သို့ ခေါ်သွင်းရာတွင် အသုံးပြုခဲ့လေ၏။
မြန်မာပြည်အဖို့ နေပြည်တော်တွင် ပင်ဂူအိမ်မြေအောင် လှိုင်ခေါင်းကြီးပေါင်း ၆၀၀ မှ ၈၀၀ အထိရှိသော သွယ်တန်း တည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းအား မြန်မာ စစ်အာဏာရှင်လက်ထက်မှ မြောက်ကိုရီးယား အင်္ဂျင်နီယာများဖြင့် မြန်မာ၏ နူကလီးယား စီမံကိန်း နည်းပညာလိုအပ်မှုအရ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄.၅ ကုန်ကျခံက ဆောက်လုပ်နေခဲ့သည်ဆိုသော အချက်လက်အား ဒီဗွီဘီ နှင် ဂါးဒီးယမ်း သတင်းစာတို့တွင အတိလင်း ထောက်ပြရေးသားထားသည်။
ထိုကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နာဝရီလ ၃၁ ရက် မတိုင်ခင်တွင် အမျိုးသား အသုံးစရိတ် လျာထားသတ်မှတ်ရေးအား အတိလင်း ပြဌာန်းရန် ဆိုသော်ငြား ပထမ ဘားဂျက် ညီလာခံတွင် ပါလီမန်မှ စစ်တပ်အသုံးစရိတ်အား ၀င်ရောက် ကြည့်ရှု့ သိမြင်နိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းကို အတိလင်းပြောဆိုထားကြောင်း သက်သေဖြစ်ခဲ့သည်။
မြန်မာပြည်သားများအဖို့ ရှင်းရှင်းကလေး သိမြင်နိုင်သည်မှာ စစ်ယူနီဖေါင်းချွတ်လာသူ ၅၈ ရာနုံန်းနှင့် စစ်တပ်မှ အလိုလျောက် ပါလီမန်ထဲဝင်လာသူ ၂၈ ရာနုံန်းတို့ အားလုံးသည် ကြံခိုင်ရေးပါတီမှ ဖြစ်နေကြပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် စစ်အသုံးစရိတ်အား အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၃ ဘီလယံသုံးစွဲရန် ပြန်ဌာန်း ကာ တနိုင်ငံလုံး၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းက ၃၆ ရာနုံန်းအား စစ်တပ်တခုအတွင်းမှ ယူငင်ဆုပ်ကိုင်ထားသည် မည်သူမှ ငြင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
ဦးသူရိန်ဇော် နှင့် ဦးမောင်တိုး နှစ်ဦးစလုံးသည် စစ်တပ်မှ ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသူများဖြစ်၏၊ ဦးသူ၇ိန်ဇော်သည် အမျိုးသား စီးပွါးရေးနှင့် အမျိုးသား စီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာန၏ ဒုဝန်ကြီးဖြစ်သည့်အပြင် ဦးသန်းရွှေလက်ထက်တလျှောက် ၄င်း၏ ခြေဖိုးပေါ်တွင် နဖူးတင်ကာ တာဝန်ထမ်းရွက်ခဲ့သည်ဖြစ်သည်။ ဦးမောင်တိုးမှာ မြန်မာ့ ပုလဲနှင့်ငါးလုပ်ငန်း၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာမှ အနာားယူပြီး ယခု နေပြည်တော်တွင် မော်ဖူးစေ အခွင့်စောင့်ကာ ဆက်လက် ကိုင်တွယ် အကွက်ရွေ့နေပြန်သည်။
U Thurein Zaw of the military-backed USDP party; the Secretary U Maung Toe is also from
USDP. U Thurein Zaw was the former Deputy Minister of National Planning and Economic Development under the Than Shwe regime and U Maung Toe is the retired managing director of the Myanmar Pearl Enterprise. Now he who retired is working in Naypyi Taw.
ယခုလောလောလတ်လတ်မှာပင်၊ နှစ်သုံးဆယ်စာချုပ်ဖြင့် ၇ခိုင်ပြည်နယ်မှ သဘာဝဓါတ်ငွေ့အား တနေ့လျှင် သန်းပေါင်း ၅၀၀မျှရှိသော ကျူဗစ်မီတာအားထုတ်လုပ်ရန်း မျှော်လင့်ထားပြီး၊ ၄င်းသဘာဝဓါတ်ငွေ့ ကျူဗစ်မီတာ ၄၀၀ အား တရုတ်ပြည်သို့ ပိုက်လိုင်းမှတဆင့် ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျူဗစ်မီတာ သန်း၁၀၀ ရာ ပြည်တွင်းသို့ပေးပို့မည်ဖြစ်၏၊ သို့သော် ပြည်တွင်းသို့ပေးပို့မည်ဖြစ်သော အဆိုပါ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ သန်း၁၀၀ရာ အခြေခံပြည်သူများလက်ထဲသို့မဟုတ်ရပဲ ဦးတေဇပိုင်သော လုပ်ငန်းများ၊ ဘိန်းဘုရာ လော်စစ်ဟန်၏ ဆွေမျိုးများပိုင်သော လုပ်ငန်းများ ဦးဇော်ဇော် ပိုင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် ဦးအောင်ကိုဝင်း ပိုင်ဆိုင်သော စက်ရုံလုပ်ငန်းများဆီသို့သာ ပေးပို့မည်ဖြစ်လေသည်။
Shwe Gas project in Arakan State is expected to produce 500 million cubic feet (mcfd) of gas per day
for 30 years. While 400 mcfd is planned for transport to China, the remaining 100 mcf is intended for domestic use. This remaining amount will be supplied to more than fifty factories owned by the
government and military cronies including arms dealer Tay Za’s Htoo Cement Factory, drug lord Lo Hsing Han’s Asia World Cement Factory, Zaw Zaw’s IGE Cement Factory, and Aung Ko Win’s Kanbawza Cement Factory.
သို့သော် ထိုကဲ့သို့ တိုင်းပြည်လူထုအတွက် အလွန့်အလွန်နည်းပါးလှသော အသုံးစရိတ်ပြဌာန်းထားမှုအား အခြားသော ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်များ၏ ပြောဆိုသံကိုလည်းကြားကြပေလိမ့်မည်း
စစ် အသုံးစရိတ်အား ဘယ်သူတဦးတယောက်မျှ ထိတွေ့ဆန်းစစ်နိုင်စရာမရှိကြောင်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ နာမည်မဖေါ်လိုသူ ပါလီမန်အမတ် ငကြောက်တဦးက အေအက်ဖ်ပီသို့ပြေားကြောင်းလဲ သတင်းက တင်ပြထားဘူးသည်။
လက်ရှိ မြန်မာစစ်တပ်သည် ကချင်တိုင်းရင်းသားများလက်နက်ကိုက်အဖွဲ့စည်းများအား လေကြောင်း ကုန်းကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်နေသည့်အပြင် လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖေါက်မှုများအား ပြုလုပ်နေကြောင်းအား နိုင်ငံတကာမှ စွပ်စွဲထားကြောင်းသိရပါသည်။
"The military expenses are untouchable. We will not complain about how much they will use,"alower-house scared MP of Aung San Suu Kyi's National League for Democracy party told AFP on condition of anonymity.
ကုလသမဂ္ဂ၏ ချစားလုပ်ကိုင်ခြင်းဆိုင်ရာကို ဆန့်ကျင်ခြင်း သဘောတူစာချုပ်ကို ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး မြန်မာပြည်မှ လက်ရှိ အကြောင်းရာများအား အတိကျ ခိုင်လုံစွာ ဆက်လက်တင်ပြပါအုံးမည်။